Qoraal uu Kamaal Guutaale uga jawaabay weerarkii Fahad uu ku qaaday Mahad Salaad - Caasimada Online
Home Maqaalo Qoraal uu Kamaal Guutaale uga jawaabay weerarkii Fahad uu ku qaaday Mahad...
Qoraal uu Kamaal Guutaale uga jawaabay weerarkii Fahad uu ku qaaday Mahad Salaad
Wareysiga taliyihii hore ee NISA Fahad Yaasiin oo u warramay wariye Farah Geylan ayaa goos-gooskiisa waxaa iiga baxay in taliyuhu uu sugi waayay inta maamulka cusub ee Madaxweyne Xasan Sheikh uu hay’adaha dowladda si dhameystiran ula wareego, lana arko jihada dalka uu u kaxeeyo, ugu yaraanna sida caadada dowladnimada ah uu u sugo xitaa 100 maalin ee koowaad ee dowlad kasta xilligaas kadib keed la qiimeeyo.
Taliyihii hore wuxuu baaq farriin ah u dirsaday ururkiisii hore ee al-ictisaam si uu oga helo meel uu ku dhuunto “protection” iyo cid u doodda maa daama loo heysto danbiya waaaweyn iyo tacadiyo uu Qaranka ka galay, xasaanadii barlamaaniga aheyd ee uu ku talo galay maa daama ay meesha ka baxday, sida muuqata wuxuu baxsad ka yahay cadaalad ay dhibanayaashiisii maanta ay ka dalbanayaan hay’adaha dowladda.
Sidoo kale, waxaa yaab leh isaga oo iska dhigaya nin weeraraya taliyaha cusub inuu si “indirect” ah farriin ugu diro hay’adaha dowladaha kale ee la shaqeeya hay’adeenna nabad Sugida ee uu leeyahay yaanan wax wada shaqeyn ah lala yeelan taliyaha cusub ama aanan xog lala wadaagin kollayba waa inta karaankiisa ah ama dowladihii uu u shaqeyn jiray oo hay’addeenna u dhex deganaa xilligii uu taliyaha ka ahaa.
Waxaa xusid mudan in afartii sano ee la soo dhaafay iney aheyd hay’adda NISA markii ugu badneyd ee ay ku dhex milanto dowlad ajnabi ah, cumalada dowladaasna ay iyada oo la wada ogyahay ay dhex daganeed xarunta hay’adda ee Habar Khadiija.
Weerarka uu taliyaha ku qaaday madaxweyne axmed Madoobe ma ahan mid cusub ee waa siyaasadii fashilantay ee reer Jubbaland lagu cunnaqabateeyay sanadihii la soo dhaafay, maamulkii Fahad diiqa ka ahaana uu kala garan waayay cadaawadda kaala dhaxeysa axmed Madoobe ha u ciqaabin shacabka Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada Jubbaland.
Intaas waa horudhac, wixii kalena waan sugeynaa!
W/Q: Kamaal Guutaale
Agaasimihii hore ee Villa Somalia